दशैं सुरु भएको दिन द,सा लाग्यो:: Mero Desh
दशैं सुरु भएको दिन द,सा लाग्यो
Published on: २२ आश्विन २०७८, शुक्रबार ०७:१०
सुनसरीको इटहरी उपमहान,गरपालिका–१६ लायन्स क्लब चोकमा सवारी दु,र्घटनामा परेर दुई जनाको मृ,त्यु भएको छ । मृ,त्यु हु,,नेमा इनरुवा– २ का २५ वर्षीय सु,शान्त भट्टराई र सङ्खुवा सभा चिचिला–२का २० वर्षीय
विभिषण विक रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेन्द्रकुमार कार्की ले जानकारी दिनुभयो । पूर्व –पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको को२०प ६७४७ नम्बरको स्कुटर लाईवि परीत दिशाबाट आउँदै गरेको ना ६ ख ५६८१ नम्ब,,रको ट्रकले ठक्कर दिँदा दुवै जना गम्भीर घाइते भएका थिए ।
घा,इते दुवै जनालाई उपचारका लागि कोशी अस्पताल विराटन गर लैजाने क्रममा बाटामैमृ, त्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।व परीक्षणका लागि कोशी अस्पताल विराटनगरमा राखिएको छ।
यो पनि,,मैले गर्दा प्रकाश सुबेदीको घरमा भात पाकिराको छ : पुजा शर्मा काठमाडौं – यतिबेला चर्चामा रहेकी नायिका हुन पुजा शर्मा,उनको प्यान पलोईङ पनि राम्रै देखिन्छ ! उनलाई केही कसैले भनेको पुजा फ्यान आ,,क्रमक पनि भइहाल्छन तर नायिका पुजा शर्मा चौध जिल्ला पश्चात् भने निकै
बि’बादमा परिन उनले टेलिभिजन कार्यक्रम रजतपटमा उनेले बोलेको शब्द नेपालमा चौध जिल्ला र बहत्तर प्रदेश छन भने पछि उनले बोलेको भिडियो क्लिप निकै भाईरल भयो !
तर यतिबेला फेरि पुजा शर्मा बि’बादमा ता निएका छन, उनले मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा आफुले बिबाद गराईदिएर प्रकाश सुवेदी हिट भएको भन्ने अभिब्यक्ती दियपछि फेरि आलो चना खेप्नुपरेको छ !
विज्ञापन:-म साधारणा लेखपढ भएको एउटा गाउको केटी हु ।मेरो घर पूर्वको दमकमा पर्दछ । हाल म काठमाणडौ मा बसो बास गरेर म काठ माणडौमा पढदैछु बेचलर रनिङमा छु ।
मेरो पढाइको विषय मेनेजमन्ट विषयमा पढछु त्यस का,,रण जापानजानको लागी मैले लगभग सम्पुर्ण तयारी गरी सके त्यस का,रण मैले यो सोचेकी म त पढन जाने हो । मेरो लगभग उमेर पनि पुगी सकेको छ ।
सम्पर्कको लागि ️तल दियको लिन्क खोल्नुहोस साथमा मैले विवाह गरेर एउटा इमान्दार केटा लाई लान सके भने उसले नि पैसा कमाउन सक्छ ।अनि मलाई पनि साहारा हुन्छ । भन्ने मेरो मनमा एउटा विचार आयो ।
उक्त विचार मैले मेरो घरमा बा आमालाइ पनि भने, र बा आमा बाट पनि त्यो कुरा लाई स्वि कार गर्नुभयो । मैले लगभग २, ३ महिना सम्म इमानदार मेहेनति सहनसिल भएको २२ बर्ष नाघे को केटा पनि खोजे तर भने जस्तो पाउन सकिन र म पूर्व घर बाट फर्केर आए ।
र हाल म अहिले पनिकाठमाणडौको बसुन्धारा मा नहि बसि रहेको छु । त्यस कारणा मलाइ छिटो भन्दा छिटो वाहिर जानु परने भएको हुदा सोहिवमोजिमको मेहेनति इमानदार केटा पाएमा वि,वाह गरिहाल्ने छु ।